Android SMS ndabere: Best SMS ndabere ngwa ọdịnala n'ihi Android
Android SMS ndabere: Best 3 SMS ndabere ngwa ọdịnala n'ihi Android
Bụrụ na ị nwere Android ekwentị na ederede mgbe mgbe, Ohere inweta bụ na ị nwere otutu nke dị mkpa na ndị bara uru obere ozi na ị ga-mgbe chọrọ atụfu. Ma ọ bụ na ị dị nnọọ họrọ ihichapụ ozi gị, ma na-achọ ndabere Android SMS maka ọdịnihu ndekọ na ịkpadoro. Ọ bụ darn mfe ndabere SMS na gam akporo, dị ka ogologo oge ị na-abịaru enyemaka site n'aka-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ. Ke ibuotikọ emi, m na-aga na-egosi gị Best SMS ndabere égwu.
Part 1: Ndabere Text Ozi na Android site na kọmputa na 1 Pịa Part 2: Ndi SMS Ndabere maka Android na 2 Free égwu
Part 1: Ndabere Text Ozi na Android site na kọmputa na 1 Pịa
Ihe niile na-na-otu Android ndabere na mgbake ngwa na kọmputa maka gị!
1 Pịa ndabere ozi ederede site na Android ka PC, ma weghachi n'oge ọ bụla.
Selectively ndabere ozi na kọmputa na-azọpụta dị ka ihe XML / TXT faịlụ.
Kpọmkwem ederede otu ma ọ bụ ọtụtụ ndị enyi site na kọmputa na ala.
Ele niile ozi ederede na eri.
Wepụ aka ekwentị oku na-aza ya a ozi mgbe ị na-arụsi ọrụ ike.
Hichapụ ozi ederede na ogbe onwe elu nchekwa ekwentị.
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị akporo ekwentị na kọmputa
Ka malitere, akpa download ma wụnye a ngwa na kọmputa gị. Mgbe echichi, ị nwere ike ẹkedori ya. Mgbe ahụ, jikọọ gị Android ekwentị na kọmputa na iji eriri USB. MobileGo ga-ntabi ịchọpụta gị Android ekwentị na-egosipụta ya data ke akpan window.
Cheta na: Mgbe iji Windows version, ị pụrụ ọbụna jikọọ gị Android ekwentị site WiFi. Ị dị nnọọ mkpa iji wụnye MobileGo ngwa aka.
Nzọụkwụ 2. selectively ndabere Ozi na Android
Pịa na SMS taabụ ịbanye SMS management window. Wee họrọ ozi na pịa Import / Export bọtịnụ. Họrọ Export niile SMS na kọmputa ma ọ bụ Export họrọ SMS na kọmputa, na-azọpụta ndị ozi na kọmputa gị na .txt ma ọ bụ .xml usoro.
Nzọụkwụ 3. ndabere ozi niile si Android
Ke akpan window, na-aga One-Click ndabere. Site ndabara, niile ọdịnaya na ị nwere ike ndabere na-ticked. Ha na-na ederede ozi, kọntaktị, ngwa, ngwa data, music, video, photos, kalenda na oku na ndekọ.
Ị nwere ike ndabere ha niile ozugbo. Ọ bụrụ na nnọọ na ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara ederede na Android, biko uncheck ndị ọzọ na ọdịnaya. Mgbe ahụ, pịa Back Up. Mgbe ahụ, nkwado ndabere na mpaghara faịlụ a ga-azọpụta na kọmputa gị. Mgbe ọ bụla ị chọrọ, ị nwere ike iweghachi ihe odide na ndị ọzọ Site na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ.
Part 2: Ndi SMS Ndabere maka Android na 2 Free égwu
SMS ndabere & Weghachi
SMS ndabere +
1. Gịnị si SMS ndabere & Weghachi
Dị ka aha ya na-atụ aro, SMS ndabere & Weghachi bụ ihe dị mfe Android ngwa na-eji ndabere Android ozi ederede ka SD kaadị. Ma ọ bụ ma ọ bụrụ na-amasị gị, ị pụrụ ọbụna bulite nkwado ndabere na mpaghara gị email, Google Drive na Dropbox. Ọ Akwadoo elu SMS ozi na XML format na-enye ohere agafeta SMS ndabere faịlụ site na otu ekwentị ọzọ. Mgbe gị na SMS igbe jupụtara, ị nwere ike iji ya hichapụ gị achọghị n'anya.
Download SMS ndabere & Weghachi si Google Play >>
2. Olee otú Jiri SMS ndabere & Weghachi
Nzọụkwụ 1. Gaa Google Play ibudata na ịwụnye SMS ndabere & Weghachi na gị Android ekwentị.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ na ngwa ma họrọ ndabere nkwado ndabere na mpaghara SMS ka SD kaadị na gị Android ekwentị.
1. Gịnị si SMS ndabere +
SMS ndabere + na-arụ ọrụ a n'ụzọ dị iche. Nke a free ngwa na-enyere ndabere SMS, oku na ndekọ na ọbụna MMS gị Gmail akaụntụ. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị na-esiri ike ndabere MMS o Android, SMS ndabere + bụ ezi nhọrọ. Mgbe ị chọrọ, ị nwere ike iweghachi SMS na oku na ndekọ azụ na ekwentị gị. Iji nke a free ngwa, i kwesịrị inwe ike IMAP na Gmail.
Download SMS ndabere + si Google Play >>
2. Olee otú Jiri SMS ndabere +
Nzọụkwụ 1. Open nchọgharị na ihe ịrịba ama na gị Gmail na akaụntụ, na mgbe ahụ adaa gị Gmail page.
Nzọụkwụ 2. Pịa gia na akara ngosi na n'elu nri akuku. Na ndọpụta menu, họrọ Ntọala. Pịa ebugharị na Pop / IMAP. Nzọụkwụ 3. Gaa IMAP Access ngalaba, họrọ Kwado IMAP. Mgbe ahụ, pịa Save Mgbanwe s. Nzọụkwụ 4. Gaa Google Play na wụnye SMS Back + na gị Android ekwentị. Kwụpụ 5. Kpatụ SMS ndabere + na ekwentị gị, na pịa ndabere nkwado ndabere na mpaghara Android SMS, MMS na oku na ndekọ gị Gmail akaụntụ.
Copy ọdịnaya site iPhone ka Android
Bugharịa faịlụ site Nokia ka Android
Nyefee na Ndi ana-akpo ka akporo ekwentị / Tablet
Otú nyefee égwu, kọntaktsị, kalinda, Music, SMS na Ọzọ si HTC ka HTC
> Resource> Android> Android SMS ndabere: Best SMS ndabere ngwa ọdịnala n'ihi Android